युगसम्बाद साप्ताहिक - हिन्दुहरुको समाधिस्थले चाहिं कसरी सम्पदा जोगिन्छ ?
Tuesday, 04.07.2020, 09:20am (GMT+5.5) Home Contact
हिन्दुहरुको समाधिस्थले चाहिं कसरी सम्पदा जोगिन्छ ?
Monday, 05.30.2011, 03:54pm (GMT+5.5)
पशुपति क्षेत्रको श्लेसमान्तक वनमा इसाई धर्मावलम्बीले पनि शव गाड्न पाउनुपर्ने भन्दै परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाले अर्को प्रश्न जन्माइदिएको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेशमा "परापूर्वकालदेखि पाशुपत क्षेत्रमा दशनामी, सन्यासी, योगी र आचार्य समूहबाहेक अन्यलाई उक्त क्षेत्रमा शव गाड्न नदिइने" उल्लेख छ । पशुपति क्षेत्रमा शव समाधिस्थ गर्नपाउनुपर्ने दावी गर्ने अन्य समुदायका लागि वैकल्पिक व्यवस्था नभइन्जेलका लागि मात्रै पाशुपत क्षेत्रमा अन्त्येष्टि गर्न चैतको तेस्रो साता सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सो आदेश विरुद्ध भरतमणी जङ्गमले दायर गर्नुभएको रिटको सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले सो आदेश गरेको हो । इसाई समुदायका मानिसको शव समाधिस्थ गर्न वैकल्पिक ठाउँ व्यवस्था गर्न पनि सरकारका नाममा आदेश गरिएको छ ।
पशुपति क्षेत्रमा गैरहिन्दुलाई समाधिस्थ गर्न नपाउने फैसला गरेको छ । सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, "पशुपतिक्षेत्र पर्यटकीय क्षेत्र भएकाले यस क्षेत्रमा समाधिस्थ गर्नाले वातावरण प्रदूषण हुनेहुँदा सोको विकल्पमा ती समुदायलाई समाधिस्थ गराउन अन्य ठाउँ उपलब्ध गराउनु ।" प्रश्न यहीनेर उत्पन्न हुन्छ । पशुपति क्षेत्र धार्मिक, पर्यटकीय मात्र होइन विश्व सम्पदा सूचीमा समेत परेको क्षेत्र हो । सो क्षेत्रमा गैरहिन्दुको शव गाड्दा वातावरण प्रदूषण हुने र हिन्दुको गाड्दा वातावरण प्रदूशण नहुने तर्क गरिएको पाइन्छ । सर्वोच्चको यस फैसलाले सो क्षेत्रमा पुनः तनाव बड्ने संकेत गरेको छ । पशुपति क्षेत्रमा शव गाड्न पाउनुपर्ने भन्दै किरात र इसाई धर्मावलम्बीहरूले संघर्ष नै चलाएका थिए ।
विश्व सम्पदा सूचीमा परेको र विश्वभरका हिन्दुहरूको आराध्यदेव पशुपतिनाथ क्षेत्रको आर्यघाटमा शवदाह गर्नेबाहेक अरु क्षेत्रमा कुनै पनि सम्प्रदाय वा धर्मावलम्बीहरूको शव समाधिस्थ गर्ने कार्य युनेस्कोको प्रावधान विपरीतको हो । हिन्दु होस् वा गैरहिन्दु, पशुपति क्षेत्र नेपालीहरूको गौरबको क्षेत्र हो र यसलाई युनेस्कोले विश्वकै सम्पदाको रुपमा स्वीकार गरिसकेपछि त्यहाँको ऐतिहासिक, पुरातात्विक र वातावरणलाई प्रभावित पार्ने कुनै किमिसका कार्य गर्न छुट दिइनु हुँदैन । पशुपतिनाथ हिन्दुहरूको आराध्य देव भएकै कारण हिन्दु धर्मावलम्बीभित्रका दशनामी, सन्यासी, योगी र आचार्य समूहलाई चाहिं शव गाड्न दिने फैसला गर्नु आफैमा उदेकलाग्दो मानिएको छ । राष्ट्रिय सम्पदालाई कुनै जात र धर्म विशेषको अधिकारसंग जोडेर हेर्ने हो भने नेपालका धेरै क्षेत्र ध्वस्त हुनेछन् । राजतन्त्रको उन्मुलन भयो भन्दैमा उनीहरूले गरेका राम्रा कामहरूको समर्थन गर्दै त्यसलाई लिपिवद्ध गर्ने काम समेत नभैरहेको अवस्थामा मुलुकमा गणतन्त्र आयो, अब राजतन्त्रका कुनै पनि कुरा अस्वीकृत छन् भन्दै काठमाडौं, भक्तपुर, पाटनका दरबार क्षेत्रलाई ‘यो राजतन्त्रको अवशेष हो’ भन्दै भत्काउन मिल्छ ? मिल्दैन । त्यस्तै पशुपति क्षेत्रमा हिन्दुहरूको केही सम्प्रदायको शव समाधिस्थ गर्न दिनु पनि त्यस्तै हो । मुलुकका सबै सम्प्रदाय सबैका लागि बराबर हुन् । त्यसमा पनि पशुपति क्षेत्र विश्व सम्पदा सूचीमा परेका कारण शव समाधिस्थ गरेर वातावरण बिगार्ने काम अस्वीकृत हुनुपर्छ । हिन्दु धर्मले कसैलाई पनि भेदभाव गरेको छैन भन्ने मान्यता राख्ने हो भने सोही अनुसारको नीति निर्माण हुनुपर्छ र कानुन पनि त्यस्तै बन्नुपर्छ । हो, एउटाले अर्कोलाई समाप्त गरी आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाउने रणनीतिक षड्यन्त्रका रुपमा अधिकारको नारा घन्काएर कुभावना प्रदर्शन गर्न भने पाइँदैन ।
राजनीतिक स्वार्थका लागि जातीय र धार्मिक विद्वेष फैलाउने काम कसैबाट हुनुहुँदैन । परिवर्तित राजनीतिक सन्दर्भमा मुलुकले यतिबेला भोगिरहेको दुर्दान्त स्थिति नै यही हो । पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाले गरेको पहिलो घोषणामा ‘नेपाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हुनेछ’ भनेदेखि नै नेपालमा इसाई धर्मावलम्बीहरूको संख्या बढाउने अभियान व्यापक रुपमा चलेको छ । नेपालको मौलिक चिनारीकाा रुपमा रहेको हिन्दु र बौद्ध धर्मलाई मास्ने अभियानकै रुपमा पशुपति क्षेत्रमा इसाईहरूको शव गाड्न पाउनुपर्ने माग उठेको हो । आज पशुपति, भोलि स्वयंभू, बौद्धनाथ परिसर, लुम्बिनी, देवघाटधाम, त्रिवेणीधाम लगायत नेपालका धार्मिक-पौराणिक स्थलहरूमा इर्साहरूले शव समाधिस्त गर्ने अभियान चलाउँदैनन् भन्ने प्रत्याभूति दिने कोही छैनन् । त्यसकारण राष्ट्रिय सम्पदाको संरक्षणका लागि सरकारले कुनै पनि पौराणिक क्षेत्रमा कसैको पनि शव गाड्न नपाइने नीति बनाएर त्यसका लागि विशेष स्थानको व्यवस्था गर्नु अपरिहार्य छ ।
पशुपतिमा इसाई धर्मावलम्बीहरूले शव समाधिस्थ गर्न पाउनुपर्ने दावीलाई सर्वोच्च अदालतले रोक्ने आदेश त दियो तर हिन्दुभित्रका केही विशेष जातिलाई सो अधिकार दिइनु युक्तिसंगत मानिएको छैन । परम्पराको संरक्षण गर्नुपर्ने एउटा दायित्व निर्वाह गर्ने क्रममा राष्ट्रिय सम्पदा नै ध्वस्त हुने काममा कसैले पनि आँखा चिम्लनु हुँदैन । सर्वोच्च अदालतले पशुपति क्षेत्रमा कसैको पनि शव गाड्न पाइँदैन भन्ने फैसला गरेको भए सिंगो राष्ट्रले खुसी मनाउने थियो ।